စကားများရန်ဖြစ်ပြီးအနိုင်ယူလိုက်တော့ရောဘာထူးမှာလဲ???🙄🙄 – Trend.com.mm
Posted on August 25, 2018 August 24, 2018 by Shun Lei Phyo
လူဆိုတာကတော့ ဒေါသတွေ မာနတွေတစ်သီတစ်တန်းကြီးနဲ့ရှိတတ်ကြတာသဘာဝပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ထိလာရင်မခံဘူး စရင်မကြိုက်ဘူး၊ အော်ရင်မုန်းတယ်၊ ရန်ဖြစ်ရင်အနိုင်ယူချင်တယ် ဒါတွေက သဘာဝတွေမလို့မဆန်းပင်မဲ့ Relationship တစ်ခုမှာရန်ဖြစ်တိုင်းအနိုင်ပိုင်းချင်နေတာမျိုးဟာ မှန်တဲ့အရာတော့မဟုတ်လေပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကာများကြတယ်ရန်ဖြစ်ကြတယ် အချေအတင်တွေပြောဆိုကြတယ် ၊ ဒီလိုပြောနေကြပင်မဲ့သင်တို့နှစ်ယောက်ကသိပ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကို ၊ ပေါင်းဖက်ရဖို့ကအဓိကပါ ပြေလည်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သို့လောသို့လောအတွေးမျိုးကိုအရင်တွေးမိတဲ့သူက အလျော့ပေးလိုက်ပါ။ လေကုန်ခံပြီးအပြိုင်အဆိုင်တွေရန်စကားမပြောပါနဲ့၊ စိတ်အပင်ပန်းခံပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နာကျည်းအောင် ပြောဆိုမနေပါနဲ့။တစ်ဖက်ကတစ်အားစိတ်တိုပြီး ပြင်းထန်နေရင်ကိုယ်ကလျော့ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ကပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ဘက်ကလျော့ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရင်အဆင်ပြေပါပြီ။ စကားများပြဿနာတတ်တိုင်းတစ်ဖက်သားကိုအနိုင်ပိုင်းပြီးပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရတော့ဘာထူးလဲ?…သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်စကားနဲ့သာသင်နိုင်မယ် မေတ္တာတရားနဲ့ကြည့်ရင်သင်ရှုံးသွားပါပြီ။ သင့်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ချင်လို့ သင့်ကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လို့ရန်တွေဖြစ်စကားတွေများနေတဲ့ကြားထဲက သူ့အတ္တသူ့စိတ်ကို လျော့ပြီးသင့်ကိုအနိုင်ပေးထားတဲ့သူရှိရင် သူ့ရဲ့အရှုံးပေးမှုကိုအသိမှတ်ပြုပြီး ရောင့်မတက်ပဲ ပိုချစ်ပေးပါ။ချစ်ခင်နှစ်သက်လို့ပတ်သတ်ခဲ့ကြပြီးမှ ဘာမဟုတ်တဲ့ တဒင်္ဂ အတ္တကြီးနဲ့ အနိုင်ယူလိုက်ရလို့သင်နိုင်တယ်ထင်ရင် အလွဲကြီးလွဲသွားမယ်ဆိုတာသိထားပြီး အနိုင်ယူလိုက်ရင်ဘာထူးမှာလဲ ? …ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးကိုကိုယ့်ခေါင်းထဲထည့်ထားရင် ဘယ်လိုဆက်ဆံရေးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပြဿနာတွေပဲတတ်တတ် အဆင်ပြေအေးချမ်းသွားမှာအသေချာပါပဲ…
လူဆိုတာကတော့ ဒေါသတှေ မာနတှတေဈသီတဈတနျးကွီးနဲ့ရှိတတျကွတာသဘာဝပါပဲ။ ကိုယျ့ကိုယျထိလာရငျမခံဘူး စရငျမကွိုကျဘူး၊ အျောရငျမုနျးတယျ၊ ရနျဖွဈရငျအနိုငျယူခငျြတယျ ဒါတှကေ သဘာဝတှမေလို့မဆနျးပငျမဲ့ Relationship တဈခုမှာရနျဖွဈတိုငျးအနိုငျပိုငျးခငျြနတောမြိုးဟာ မှနျတဲ့အရာတော့မဟုတျလပေါဘူး။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျစကာမြားကွတယျရနျဖွဈကွတယျ အခအြေတငျတှပွေောဆိုကွတယျ ၊ ဒီလိုပွောနကွေပငျမဲ့သငျတို့နှဈယောကျကသိပျခဈြခဲ့ကွတဲ့သူတှဆေိုတဲ့အတှေးမြိုးကို ၊ ပေါငျးဖကျရဖို့ကအဓိကပါ ပွလေညျဖို့ပဲလိုအပျပါတယျဆိုတဲ့သို့လောသို့လောအတှေးမြိုးကိုအရငျတှေးမိတဲ့သူက အလြော့ပေးလိုကျပါ။ လကေုနျခံပွီးအပွိုငျအဆိုငျတှရေနျစကားမပွောပါနဲ့၊ စိတျအပငျပနျးခံပွီးတဈယောကျကိုတဈယောကျနာကညျြးအောငျ ပွောဆိုမနပေါနဲ့။တဈဖကျကတဈအားစိတျတိုပွီး ပွငျးထနျနရေငျကိုယျကလြော့ပေးလိုကျပါ။ ကိုယျကပွငျးထနျနတေဲ့အခြိနျမှာလညျးသူ့ဘကျကလြော့ပေးနိုငျတဲ့သူဖွဈရငျအဆငျပွပေါပွီ။ စကားမြားပွဿနာတတျတိုငျးတဈဖကျသားကိုအနိုငျပိုငျးပွီးပွောလိုကျဆိုလိုကျရတော့ဘာထူးလဲ?…သခြောစဉျးစားကွညျ့ရငျစကားနဲ့သာသငျနိုငျမယျ မတ်ေတာတရားနဲ့ကွညျ့ရငျသငျရှုံးသှားပါပွီ။ သငျ့နဲ့အေးအေးဆေးဆေးဖွဈခငျြလို့ သငျ့ကိုဆုံးရှုံးရမှာကွောကျလို့ရနျတှဖွေဈစကားတှမြေားနတေဲ့ကွားထဲက သူ့အတ်တသူ့စိတျကို လြော့ပွီးသငျ့ကိုအနိုငျပေးထားတဲ့သူရှိရငျ သူ့ရဲ့အရှုံးပေးမှုကိုအသိမှတျပွုပွီး ရောငျ့မတကျပဲ ပိုခဈြပေးပါ။ခဈြခငျနှဈသကျလို့ပတျသတျခဲ့ကွပွီးမှ ဘာမဟုတျတဲ့ တဒင်ျဂ အတ်တကွီးနဲ့ အနိုငျယူလိုကျရလို့သငျနိုငျတယျထငျရငျ အလှဲကွီးလှဲသှားမယျဆိုတာသိထားပွီး အနိုငျယူလိုကျရငျဘာထူးမှာလဲ ? …ဆိုတဲ့ မေးခှနျးလေးကိုကိုယျ့ခေါငျးထဲထညျ့ထားရငျ ဘယျလိုဆကျဆံရေးမြိုးပဲဖွဈဖွဈ ဘာပွဿနာတှပေဲတတျတတျ အဆငျပွအေေးခမျြးသှားမှာအသခြောပါပဲ…